အဆိုပါGED®စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ? | USAHello | USAHello
အဆိုပါGED®စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ? သင့်ရဲ့စမ်းသပ်အတှကျပွငျဆငျဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းGED®စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲဆိုတာသိရန်ဖြစ်ပါသည်. ဤတွင်သင်GED®စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲဆိုတာအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျအွန်လိုင်းGED®စမ်းသပ် ယူ. မသွားနိုင်.
သငျသညျ English သို့မဟုတ်စပိန်အတွက်စမ်းသပ်မှုယူနိုင်ပါသည်.
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုရှိပါတယ်4စိတျအပိုငျး, အသီးအသီးသောအကြောင်းအရာများကိုဧရိယာဘို့တ (ဘာသာရပ်).
မြေတပြင်လုံးကိုစမ်းသပ်အကြားကြာ7နှင့် 8 နာရီ, ဒါပေမယ့်သင်ကယူနိုင်ပါသည်42-တစ်နှစ်ကာလအတွင်းကွဲပြားခြားနားသောရက်အစိတ်အပိုင်းများ. ဒါကအလုပ်ရှုပ်လုပ်သားများနှင့်မိဘများအတွက်ကောင်းလှ၏. ဒါဟာသင်တက်ရန်အဘို့အစမ်းသပ်မှု၏အသီးအသီးအစိတ်အပိုင်းအတွက်လေ့လာရွေးချယ်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည် 8 လများ, အခြားပြီးနောက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု. သို့မဟုတ်သင်ပြီးသားကိုသိစိတျအပိုငျးယူနိုင်ပါသည်, ထို့နောက်ခက်ခဲအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အလေ့လာဖို့သင်၏အချိန်ကိုသုံးပါ.
အဆိုပါGED®စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ? အဆိုပါGED®စမ်းသပ်မေးခွန်းများကိုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်. စမ်းသပ်မှုရှောက်သွား, သငျသညျမှန်ကန်သောအဖြေကိုမေးခွန်းအများစုကိုပေးရန်ရှိသည်.
သင့်ရဲ့စမ်းသပ်အပေါ်မေးခွန်းအများစုမှာမျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကိုပါလိမ့်မည်. တစ်ဦးကမျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုမေးခွန်းတစ်ခုကိုသငျသညျအဖြေကိုတစ်ဦးရှေးခယျြမှုပေးသည်. မေးခွန်းကစာသားနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေခြင်းငှါ,, သို့မဟုတ်ပါကပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်မြေပုံအကြောင်းကိုဖြစ်နိုင်. ဒါဟာပုံဖြစ်စေခြင်းငှါ,, တစ်ဦးဇယားအပါအဝင်, စားပှဲ, သို့မဟုတ်ဂရပ်. စာသားသို့မဟုတ် image ကိုအောက်တွင်မေးခွန်းတစ်ခု, ပြီးတော့အဖြေကိုတစ်ဦးစာရင်းဖွစျလိမျ့မညျ, ဒီလိုမျိုး. သငျသညျစက်ဝိုင်းနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လက်ျာတစျဦးကိုရှေးခယျြ.
မျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကို ပတ်သက်. ကောင်းသောအရာအဖြေကိုသငျသညျများ၏ရှေ့မှောက်၌ရှိစဉ်အမြဲဖြစ်ပါတယ်. သင်ရုံကဖြစ်သည့်တဦးတည်းထွက်တွက်ဆရန်ရှိသည်. ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ပေးထားသောနေကြသည်သတင်းအချက်အလက်များမှာဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါတယ်. အလွန်ဂရုတစိုက်မေးခွန်း Read, လွန်း. ဒါဟာသင်နည်းနည်းလှည့်စားစေခြင်းငှါ, ဥပမာ -, ဒါကြောင့်ဤသို့ပြောနိုင်သည်, စစ်မှန်တဲ့ဘယ်အဖြေမဟုတ်ပါဘူး?
အဆိုပါGED®စမ်းသပ်မှုအနည်းငယ်သည်အခြားမေးခွန်းတစ်ခုကိုကို formats ရှိပါတယ်. သူတို့က:
အားလုံးထွက်ကြိုးစားပါ သင်စမ်းသပ်မှုအပေါ်မြင်ရပါလိမ့်မည်, ဤGED®ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအမျိုးအစားများ. သငျသညျရှေ့အချိန်လေ့ကျင့်လျှင်သင်မေးခွန်းအမျိုးအစားများအားလုံးဖြည့်စွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်!
အဆိုပါGED®စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတို့ပါဝင်သည် “တိုးချဲ့တုံ့ပြန်မှု” ဘာသာစကားအနုပညာအတွက်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို (စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်း) အပိုင်း. သင်ပေးထားသောနေကြသည်တစ်ဦးခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. တစ်ခုအက်ဆေးရေးသားဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်. ဒါဟာ၏တိုတောင်းတဲ့အက်ဆေးပါလိမ့်မည်4သို့7အပိုဒ် (တစ်အပိုဒ်တစ်ဦးထက်ပိုဝါကျကိုဆိုလိုသည်).
အဆိုပါစမ်းသပ်သူများသင်သတင်းအချက်အလက်နားလည်နိုင်မမြင်ချင်, စိတ်ကူးတစ်ခုသို့မဟုတ်ထင်မြင်ချက်ဖွံ့ဖြိုး, ဥပမာပေး, နှင့်သင်တို့၏အကြံအစည်နှင့် ပတ်သက်. ရှင်းလင်းစွာရေးဖို့. သူတို့ကသင်တို့ကိုလည်းမှန်ကန်စွာအင်္ဂလိပ်ရေးရန်နှင့်သင့်အရေးအသားတင်ဆက်ဖို့ကွန်ပျူတာကိုသုံးနိုင်သည်ကိုငါတို့သိမြင်ချင်.
ရှိပါတယ်4အကြောင်းအရာဒေသများ (ဘာသာရပ်များ) အဆိုပါGED®စမ်းသပ်မှုအပေါ်: လူမှုရေးလေ့လာမှုများ, သိပ္ပံ, သင်္ချာအတတ်ပညာ (တိုတောင်းသောအဘို့အသင်္ချာ), နှင့်ဘာသာစကားအနုပညာ (စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်း).
အဆိုပါGED®စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကဘာလဲ: ဘာသာစကားအနုပညာ (စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်း)
အဆိုပါGED®ဘာသာစကားအနုပညာ (စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်း) သငျသညျသငျဖတျသောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ပုံကိုကောင်းစွာစမ်းသပ်တိုင်းတာမှုများ, သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာရေးသားနိုငျပါလျှင်, နှင့်မည်သို့ကောင်းစွာသင်သည်သင်၏အတွေးအခေါ်များကိုရှင်းပြနိုင်ပါတယ်.
စမ်းသပ်မှုသည်GED®ဘာသာစကားအနုပညာ 150 ရှည်လျားမိနစ်, 10 မိနစ်ချိုးအပါအဝင်. ဒါဟာသုံးကဏ္ဍများရှိပါတယ်:
စာဖတ်ခြင်း - 60 မိနစ်များ
စာအရေးအသား (ဘာသာစကား) - 35 မိနစ်များ
စာအရေးအသား (စာစီစာကုံး) - 45 မိနစ်များ
စမ်းသပ်မှု၏ဖတ်နေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစာသားကိုတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းအနေဖြင့်မေးခွန်းများကိုနားလည်နှင့်ဖြေဆိုရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုစုံစမ်းမည်. အဆိုပါကျမ်းတစ်ဦးမိန့်ခွန်းထဲကနေပါလိမ့်မယ်, စာတစ်စောင်, သတင်းစာဆောင်းပါး, သို့မဟုတ်စာအုပ်ကနေကျမ်းပိုဒ်. အဆိုပါအရေးအသား (ဘာသာစကား) စမ်းသပ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသင်အရေးအသား၏မှန်ကန်သောနည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းများမေးပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာသဒ္ဒါသင်တို့၏နားလည်မှုစုံစမ်းမည်. ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုပုဒ်မမျိုးစုံရွေးချယ်မှုကိုသုံးပါ, နှင့်အခြားရိုးရှင်းသောဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအမျိုးအစားများ. တတိယအပိုင်းတစ်ခုအက်ဆေးရေးသားဖို့သငျသညျလိုအပ်ပါတယ်.
သင်ကဘာသာစကားအနုပညာစမ်းသပ်သွားမဆိုဖြစ်ရပ်မှန်များကိုသိရန်မလိုအပ်ပါဘူး. သင်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းအားဖြင့်ဖတ်ရှုခြင်းအရာကိုသိနားလည်ကြောင်းပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်, သငျတို့သမှန်ကန်သောအင်္ဂလိပ်ရေးလိုက်နိုငျကွောငျး. သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ ဘာသာစကားအနုပညာစမ်းသပ်မှုအကြောင်းကိုပိုမို.
အဆိုပါGED®လူမှုရေးဘာသာရပ်စမ်းသပ်သမိုင်းသင်တို့၏နားလည်မှုကိုတိုင်းတာ, ဘောဂဗေဒနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပထဝီ, တချို့ကမ္ဘာကြီးကိစ္စရပ်များကိုလည်း.
အဆိုပါGED®လူမှုရေးဘာသာရပ်စမ်းသပ်ကြာ 70 မိနစ်များ. ဒါဟာအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုအမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုသည်, မျိုးစုံရွေးချယ်မှုအပါအဝင်, ဆွဲ-and တစ်စက်, ပူပြင်းတဲ့အစက်အပြောက်, နှင့်ဖြည့်ပါ-in-the-လွတ်. အဆိုပါမေးခွန်းများကို Civic နဲ့အစိုးရအကြောင်းကိုများမှာ (50%), ယူနိုက်တက်စတိတ်သမိုင်း (20%), စီးပွားရေး (15%), ပထဝီနှင့်ကမ္ဘာနှင့် (15%). သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ လူမှုလေ့လာမှုများစမ်းသပ်မှုအကြောင်းကိုပိုမို.
အဆိုပါGED®သင်္ချာစမ်းသပ်သင်္ချာအတော်ကြာအမျိုးမျိုးသင့်ရဲ့နားလည်မှုကိုတိုင်းတာလိမ့်မယ်. ဤရွေ့ကား algebra ပြဿနာများဖြေရှင်းရေးပါဝင်သည်, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကျွမ်းကျင်မှု, ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အရေအတွက်အားအသိနှင့်ဆင်ခြင်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှု.
ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသင်များ၏ရှေ့မှောက်၌သတင်းအချက်အလက်များနားလည်ပြီးအဲဒီအကြောင်းမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုဆိုလိုသည်. စမ်းသပ်မှုအများစုဟာကိုယ့်အခြေခံသင်္ချာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဆင်ခြင်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါလိမ့်မယ်. ပိုအဆင့်မြင့်သည့်အကြောင်းအရာများတပြင်လုံးကိုစမ်းသပ်ထဲကအနည်းငယ်မေးခွန်းများကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်.
အဆိုပါGED®သင်္ချာစမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ် 115 မိနစ်ရှည်လျားအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်:
အပိုင်း 1 (ပထမဦးဆုံး 5-7 စမ်းသပ်မေးခွန်းများကို) - တစ်ဂဏန်းတွက်စက်ခွင့်မပြုပါ
အပိုင်း2(ကျန်ရှိသောစမ်းသပ်မေးခွန်းများကို - တွေအကြောင်း 40) - တစ်ဂဏန်းတွက်စက်ခွင့်ပြု
ကျောင်းသားများပထမဦးဆုံးမေးခွန်းများသူတို့ရဲ့အဖြေတွေကိုတင်သွင်းရပါမည် (ဂဏန်းတွက်စက်ခွင့်မပြု) စမ်းသပ်မှု၏ကျန်မှပေါ်ရွေ့လျားမတိုင်မီ. သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ ယင်းသင်္ချာကိုစမ်းသပ်အကြောင်းပိုမို.
on-screen ကိုGED®စမ်းသပ်ဂဏန်းတွက်စက်ကိုသုံးပါဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းဗီဒီယိုအား Watch
အဆိုပါGED®သိပ္ပံစမ်းသပ်မှုအချို့အခြေခံသိပ္ပံနည်းကျစိတ်ကူးများသင့်ရဲ့နားလည်မှုကိုတိုင်းတာ. သင့်ရဲ့စမ်းသပ်သိပ္ပံပညာ၏အချို့သောဒေသများအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်: ဘဝသိပ္ပံ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ, နှင့်မြေကြီးနှင့်အာကာသသိပ္ပံ. ဒါဟာအစသိပ္ပံပညာရှင်များစိတ်ကူးများဖွံ့ဖြိုးမည်သို့သင့်ရဲ့အသိပညာစမ်းသပ် (သိပ္ပံနည်းကျနည်းလမ်း).
အဆိုပါGED®သိပ္ပံစမ်းသပ်မှုကြာ 90 မိနစ်များ. ဒါဟာရှိပါတယ် 34 သို့ 45 အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုအမျိုးအစားများကိုသုံးပြီးမေးခွန်းများကို, မျိုးစုံရွေးချယ်မှုအပါအဝင်, ဆွဲ-and တစ်စက်, ပူပြင်းတဲ့အစက်အပြောက်, နှင့်ဖြည့်ပါ-in-the-လွတ်. အတော်များများကမေးခွန်းများကိုရိုးရှင်းတဲ့သိပ္ပံနည်းကျစာသားကိုဖတ်ပါနှင့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ်. သင်တို့သည်လည်းစားပွဲနှင့်ဇယားတွေအများကြီးတွေ့မြင်ဖို့နဲ့သူတို့ကိုအကြောင်းကိုမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်မြျှောလငျ့နိုငျ. သငျသညျချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကမေးခွန်းအချို့တစ်ဂဏန်းတွက်စက်ကိုသုံးပါစေခြင်းငှါ. သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ သိပ္ပံစမ်းသပ်မှုအကြောင်းကိုပိုမို.
သင်လုပ်နိုင်သည် အဆိုပါGED®စမ်းသပ်မှုယူဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာတွေ့ သင့်ရဲ့ပြည်နယ်.